Cho na Social Media adighi mfe
Social media dị mfe. Ihe ochicho njini ka odi nfe. Gingde blọgụ dị mfe.
Kwụsị ikwu ya. Ọ bụghị eziokwu. Teknụzụ dị egwu. Companieslọ ọrụ ndị a na-alụ ọgụ na-agba mbọ na teknụzụ leverage na ọwa ọhụụ iji nweta nsonaazụ dị mma. Ọtụtụ na-agbahapụ ya ma ọ bụ na-ezere ya kpamkpam. N'ịntanetị, ọchụchọ na mgbasa ozi ọha na eze abụghị obere egwu.
Twitter dị mfe, nri? Kedu otu o siri sie ike iji pịnye mkpụrụ edemede 140? Ọ bụghị… belụsọ na ejikọtara gị na ọrụ na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ, na-enwe nrụgide iji wepụta nsonaazụ n'oge nlaazu a, ma chọọ ịgwakọta nnukwu tweet na ụfọdụ nsuso ahụike iji chụpụ okporo ụzọ na saịtị gị iji tọghata onye ahịa. Mee ya niile n'emeghị ihe ndị na-esonụ ma mebie akara gị.
Njikarịcha dị mfe, nri? Naanị chọta mkpụrụokwu ma megharịa ha ọtụtụ ugboro. Chọpụta… gwụla ma ị na-asọmpi maka isiokwu - mgbe ahụ SEO siri ike karịa.
Lezienụ kwa click dị mfe. Tọọ mmefu ego wee pịa gawa. Na ekemende na-agba ọsọ gị mmefu ego akọrọ na-enweghị ihe ọ bụla tọghatara. Kwalite ogo ogo mgbasa ozi, ịtọ oku iji rụọ ọrụ, ịchekwado ọdịnaya gị, ịhazi usoro mgbasa ozi gị, ịmalite usoro isiokwu na-adịghị mma, yana ịwụnye peeji ọdịda gị adịghị mfe.
Gingde blọgụ bụ otu achicha. Wụnye WordPress na akaụntụ nnabata $ 6 ma dee ọdịnaya kwa ụbọchị. Na-ebuli isiokwu gị elu. Na-ebuli ọkwa ọ bụla. Na-akwalite blog. Syndicate ọdịnaya. Kwa ụbọchị dee banyere otu ngwaahịa, ọrụ na ndị ahịa. Kwa ụbọchị na-eme ka ọdịnaya bara ọgaranya maka ọchụchọ, na-akpali ndị ọbịa, ma na-atụ anya atụmanya n'ime ahịa. 1bọchị 180 dị mfe. XNUMXbọchị XNUMX… adịghị mfe.
Anyị na onye ahịa na - arụ ọrụ ugbu a ejirila ọtụtụ narị puku dollar na mgbasa ozi ọdịnala, na nsonaazụ dara ogbenye, mana etinyeghị ego na atụmatụ ọnlaịnụ maka ebumnuche di na nwunye. Nke mbu, ha enweghi ihe omuma di n'ime iji kọwaa ma mezuo usoro mmeri. Nke abuo, ha echegbughi ndi oru ndi ozo n'ihi na onye obula mere ka odi mfe. Ha gbasiri mbọ ike ma ha enwetaghị nsonaazụ… ya mere ha laghachiri na mgbasa ozi ọdịnala.
Ohere ha bu di egwu, ma ha guru uju site n’agu ihe edere n’akwukwo banyere otu ihe si di nfe. Ọ dịghị mfe, ndị be anyị! On a kpọmkwem ahịa, m ga-eleghị anya na-arụ ọrụ na-erughị 5 dị iche iche sịrị… a na-akwụ kwa click management ike, a search engine njikarịcha ike, a ọdịnaya strategist, a mbọn na ndịna-emeputa ike, na-eji m azum maka search na mgbasa ozi mmekọrịta na ha. Ọ bụ atụmatụ siri ike na anyị nwere obere oge iji zụlite, gbue, ma bido ịtụpụta nsonaazụ. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịnweta ọnụ ahịa ọ bụla n’ime ọnwa isii ruo ọnwa iteghete, anyị ga-atụfu onye ahịa anyị.
Nke ahụ adịghị mfe.
Tags: amazon s3nsonaazụ azụmahịaikoriagbanwe agbanweTụọ CPmyreponogaa na oge